Warar - Luul Shell
Dabacsan Pearl Strand
Waa maxay luul qolof ah?
Dad badan ayaa aad u jecel luulka, laakiin qayb iyaga ka mid ah ayaa yaqaan luul qolof leh oo mid kale ayaa odhan doona waa maxay luul qolofku? oo iyagu waa luul been abuur ah?
Luulka qolofku waa 'luul' cusub oo lagu sameeyo qolof. Dadku waxay furaan lohodka waxayna soo qaadaan luulka, wey nadiifiyaan qolofka waxayna ku shiidaan qolofka budada, ka dibna dib u qaabeeyaan qaabka iyagoo u baahan qaab. Kuul qolof ah ayaa dhammaaday.
Ma luul beena ah?
Jawhar sax ah iyo luul qolof waa kala duwan yihiin, luul qolofta ayaa kala duwanaan doonta midabkuna wuu ka sii ballaadhan yahay qiimahana ma ahan mid qaali ah dad badan ayaa la awoodi karay, luulka qolofku wuxuu yeelan doonaa qaab aad u badan waa la beddeli karaa, qaabka dhabta ah ee luulka oo dhammaantood ay u qaabayn karaan sida iyaga iyo sidoo kale wuxuu samayn karaa qaab kale oo badan oo luul dhab ahi aanu lahayn.
Maaddaama luul qolof ah ay sameeyeen dadku tayada waa la xakameyn karaa, badankood waxay leeyihiin dusha wanaagsan iyo tayo sare leh. Jawharka 'Shell' waxaa sameeyay dad, waxay muujinayaan midabka quruxda badan, cabirka, muuqaalka wanaagsan, iyagoo abuuraya luul kaamil ah.
Shell luul dahab ah
Waxyaabo aad u badan oo Dahab ah ayaa aqbala isticmaalka luul qolof ah si loo sameeyo jijin, silsilad, giraan, jeex, maaddaama ay leeyihiin qaabab badan oo dahab badan ay isticmaalaan alaabta qaabka kala duwan ee dahabka moodada badan.
Dahabka Zhuji sidoo kale wuxuu sameeyay luul qolof badan iyo Jawharad qolof leh haddii aad jeceshahay fadlan nala soo xiriir.
Hilqado Khatar Pearl, Murriyado Pearl Bead, Hilqado jilicsan Hoops Pearl Hilqado, Huggie Hoops Pearl Hilqado, Hilqado Aroos, Hilqado Qurxin Pearl,
Luul Freshwater la xardhay